नेकपामा अब ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’ « News24 : Premium News Channel
काठमाडौँ, २२ वैशाख । नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘नाटकीय’ रूपमा परिवर्तन भए । बैठक सुरु हुनुअघिसम्मको स्थितिअनुसार उनी शनिबार पनि त्यसैगरी कड्किनुपर्ने हो, जसरी बुधबार प्रस्तुत भएका थिए ।
बुधबार गर्मागर्मी वादविवाद गरेर बाहिरिएका नेकपा सचिवालय सदस्यहरूको शनिबार साँझको छलफल सौहार्दपूर्ण रूपमा कसरी अगाडि बढ्यो ? बराबरी हैसियतमा बसेर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र दाहालले पार्टी एकताबारे उस्तै खालको अभिव्यक्ति दिन कसरी सम्भव भयो ? जबकि बुधबारको बैठकमा दाहालको आक्रोश, शुक्रबार ओली र दाहालबीचको भेटमा भएका असमझदारी र शनिबार दिउँसोसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमले सचिवालयको बैठक बहुमत–अल्पमतकै लडाइँमा पुगेर रोकिन्छ भन्ने आकलन स्वयं नेताहरूले पनि गरेका थिए । याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।